Ezokuvakasha zaseCaribbean zihlala zinethemba lokuthi zizophinde zibuyele emuva naphezu kwe-Omicron snag entsha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » I-Caribbean » Ezokuvakasha zaseCaribbean zihlala zinethemba lokuthi zizophinde zibuyele emuva naphezu kwe-Omicron snag entsha
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Ukuhamba ngesikebhe • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Imishado Yezothando Izinyanga Zekhefu • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Ezinyangeni eziyishumi nesishiyagalombili ezedlule, izindawo zase-Caribbean, ngaphandle kokukhetha, ziye zabonisa ukuqina kwazo ekudaleni amasu okubuyisela, ukuhlanganisa izimiso zokuhamba ezibuyekezwa njalo, nokusebenzisana nabalingani besifunda nabamazwe ngamazwe emikhakheni yezempilo nezomnotho kanye nokwesekwa nokuthuthukiswa.
The Inhlangano Yezokuvakasha YaseCaribbean (CTO) Uhlale enethemba ngokuqhubeka nokusimama kwemboni yezokuvakasha ngisho naphezu kokungaqiniseki okubangelwa ubhubhane oluqhubekayo.
Ezinyangeni eziyishumi nesishiyagalombili ezedlule, I-Caribbean izindawo okuyiwa kuzo, ngaphandle kokukhetha, zibonise ukuqina kwazo ekudaleni amasu okubuyisela, okuhlanganisa izimiso zokuvakasha ezibuyekezwa kaningi, nokusebenzisana nabalingani besifunda nabamazwe ngamazwe emikhakheni yezempilo nokwesekwa kwezomnotho nentuthuko. Ukubuyisela esimweni ngasinye, kwenzeke ngesikhathi kuqinisekiswa impilo nokuphepha kwezakhamuzi nezivakashi ngokufanayo.
Unyaka wezi-2021 usinike inkomba yokuthi kunokukhanya ekupheleni komhubhe omude owaqala ngoNdasa wezi-2020. Maphakathi no-2021, sabona ushintsho kwezokuvakasha, I-Caribbean ukweqa isilinganiso somhlaba sokukhula kokufika kokuhlala kanye negalelo lezokuvakasha emkhiqizweni omkhulu wasekhaya (GDP). Ngekota yesithathu ka-2021, kube nezivakashi ezifika ezigidini ezi-5.4 esifundeni, cishe izikhathi ezintathu zabafika ngesikhathi esifanayo ngo-2020, kodwa namanje zingamaphesenti angama-23.3 ngaphansi kwamazinga ka-2019. Imibiko yokuqala iphakamisa ukuthi le nqubekelaphambili iqhubekile kwaze kwaba sekupheleni kwekota yokugcina. Ngakho-ke, kulinganiselwa ukuthi abavakashi abafika ngo-2021 bazodlula amazinga angama-2020 ngamaphesenti angama-60 kuye kwangama-70.
Njengoba siqala u-2022, siphinde sibhekana nemiphumela yenguquko entsha ephinde ibe nomthelela omubi ekuhambeni kwamazwe ngamazwe, siduduzwa isipiliyoni sokuthola kabusha kanye nezifundo ezifundwe ngo-2021.
Lezi zenzakalo nezifundo zisifundise ukuthi ukuhamba nokungenisa izihambi kungaba khona kanye nobhubhane oluthinta kokubili izindawo zethu nezimakethe. Yize imiphumela kuze kube manje ingakakhombisi ukubuya kumazinga ka-2019, imiphumela ehlukile eqoshwe ehlobo kuya ekupheleni konyaka ka-2021 ibonisa ukuthi ukuphindaphinda okulinganiselwe noma kancane kancane kungenzeka futhi kungenzeka kakhulu ekupheleni kuka-2022.